Iziqhingi zaseBalearic zifuna ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu ngokuvimbela izimoto zikadizili kusuka ku-2025 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Okwamanje kungabonakala njengomqondo othanda ukuvelela, kepha kubonakala sengathi kunethuba elihle lokuthi kuzoba ngokoqobo uma kungekho okuvimbayo: UHulumeni weziqhingi angazivimbela izimoto zikadizili kusukela ngonyaka ka-2025 sibonga umthetho osalungiswa ozothinta ukubhaliswa okusha nezimoto eziqashisayo nezivakashi ezifika eziqhingini ngemoto yazo ngokuhamba ngolwandle.
Ngayo yonke into, balindele ukuba nemishini embalwa engama-90% ngonyaka ka-2050, into ngokungangabazeki ethakazelisa kakhulu uma kubhekwa ukuthi isikhungo samandla kagesi esiqhakazile, esaseMurterar, esise-Alcúdia (Mallorca), sibangela ukufa kwabantu abangu-54 ngaphambi kwesikhathi ngonyaka njengoba kubikiwe I-Diario de Mallorca.
Eminyakeni yamuva, ikakhulukazi kusukela ngo-2016, izimoto zezimoto eziqhingini bezilokhu zikhula njalo. Izimoto, ikakhulukazi udizili, ezingasatshalaliswa kuphela ngabantu abafuna ukuchitha iholide elihle, kodwa futhi zikhipha amagesi angcolisa umoya ophefumulwa yizakhamizi unyaka wonke. Ukugwema ukuthi isimo singabi sibi kakhulu, kuzokwenzakalani ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu izimoto ezivinjelwe ezihamba ngodizili.
Kodwa futhi, isitshalo i-Es Murterar kulindeleke ukuthi sivalwe kancane kancane: iqembu 1 no-2 ngo-2020, neqembu 3 no-4 ngo-2030. Kepha akupheleli lapho: kuhlelwe ukufaka esikhundleni sokukhanyisa komphakathi, nokufakwa kwamapaneli elanga ezindaweni zokupaka izimoto nasezinqolobaneni ezintsha. Endabeni yesiqhingi saseFormentera, ungabeka futhi isibalo sezimoto ezifika ehlobo, njengoba kuyisiqhingi esincane esizungeza, ngo-Agasti, cishe izimoto ezingama-50.872 XNUMX ngosuku.
Inkinga ukuthi nguhulumeni omkhulu, owaseMadrid, onegama lokugcina. Ngemuva kokuchithwa kokuvalwa kuka-Es Murterar, ngubani owaziyo okungenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Iziqhingi zaseBalearic zifuna ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu ngokuvimba izimoto zikadizili kusukela ngonyaka ka-2025